Kusvirwa nababa Kudzi Mwana Achiyamwa! – Makuhwa.co.zw
Kusvirwa nababa Kudzi Mwana Achiyamwa!
Kwakange kwatopera mwedzi inokwana 5 Kudzi azvarwa. Baba vake ndakanga ndavaona ruviri chete panguva yese iyi sekuti pakanga pasina kuwirirana pakati pedu nenyaya yechana ichi, uye ndaigara nevabereki vangu.
Chero pandakadzokera kuflat kwangu Kudzi ave ne 4 months, taive tisati tamboonana. Baba vaKudzi vainge vakatoroora kare uye vaine zvana zvavo, saka vainge vasina kufara nemimba yaKudzi yandakazoita. Pamwedzi mishanu yese iyi, ndakange ndave kutofunga zvangu kuti semusikana wechidiki kudai, dai ndazviwanirawo wandiingadanane naye pavakomana vese vaindinyenga pese pandaifamba. Ndaiti ndikasiya mwana ndomboenda kumaclubs, marestaurants,movies, nedzimwe nzvimbo dzekufara, ndainetswa nevakomana vakawandisa vachindida asi ndichiramba hangu semunhu aida kuzvibata uye ndaieve nekacheche. Asi ndakange ndogaronzwa ropa rangu kupisa nekumhanya mhanya nekuda kuswirwa semunhu akange agarisa. Ndaiti kana ndikarara hope dzainonoka kuuya ndichingofunga makwirigw andingade kuitwa. Pamwe ndaimbofunga ndichiiswa nerefurefu yakatetepa, pamwe ndombohwa ndichida rino zipfupi zigobvu gobvu. Pamwe ndaimbohwa
ndichida kuitwa nekumashure, pamwe ndombonzwa ndichida kukwira pamusoro inindega ndonyatsozvibatira mboro ndoipinza mubeche rangu pamadiro. Pamwe ndaitombonzwa ndichitoda kuiswa mumhata chaimo. Pamwe ndaimbofunga zvekuyamwa mboro, pamwe ndombonzwa ndichida kudyiwa matinji angu. Ndaiti ndikabatiwa nepfungwa idzi beche rangu raibva yanyorova, ndozopedzisira ndave kutambisa ndega matinji angu.
Musi wakauya baba vaKudzi pfungwa idzi dzaitenge dvavekunyaya. Kudzi chakanga chichangopedza kuyamwa chikakotsira. Kuyamwa kwachaiita minyatso yangu ndakabva ndavhara maziso ndonzwa kunge ndiri kuyamwiwa nemumwe mukomana andakanga ndaevegwa naye ku dinner kwandakange ndaenda neshamwari dzangu marumwezuro achoni. Handina kana kuzoona kuti chana chatokotsira, kana kuti ndakaisa sei ruvoko
muburugwa rangu, idzo pfungwa dzangove dzekukwirwa nemukona uyu. Kana pakagogodza baba Kudzi handina kana kumbozvinzwa, ndokutozovhunduka ndonzwa munhu achiti ‘ko zvamuchabiwa muchikotsira madoor akashama kudai?’
‘Ah, ko inga ndibaba Kudzi. Ko munobvanepi munongouya musina kana kumbofona? ‘Ndangoti ndipfuure ndichikuonai. Akadii Kudzi inga akura chaizvo. Ko kurara masikati ano asi ari kurwara? ‘Kurwara kwaani, chinokara chana chako ichi. Tarisa uone kuonda kwandatoita nekungogara ndichiyamwiwa pese pese! Ko sei kurara ruoko ruri mubhurugwa wakaisa hako zvinhu zvese pachena kudai?’Ndakanzwa kakunyara sekuti ndakange ndisina kuona kuti ndizvo zvandakanga ndakaita. Ndisati ndambopindura ndakabva ndahwa rurimi rwababa Kudzi rwopinda mukanwa mangu vachitondikisa, rumwe ruoko rwavo rodzika kumagaro angu. Ndakavhura muromo ndovakisawa, uku ndichiita kunge munhu ashamiswa nezviri kuitika. ‘makiya here door? Mumwe munhu angangopinda?’ Rume rakasvetuka ndokunokiya.
Parakadzoka ndakaona inga trousers ririkuita kunge richabvaruka pamberi nekumira kwakange kwatoita zimboro, ratozvimba pamberi pese apa kunge vaviga zibroiler muburugwa. Ndakabva ndanzwa kupera simba. Vakabva vangoti hembe katanu katanu vachikanda kwakadaro uku, ndokungosvika pamubhedha vachikatanurawo nedzangu, vachifemera pamusoro kunge munhu anomhanyisiwa. Iro zimboro rakange rakamira kunge museve wakabhenda, zvekuti ndakatombonzwa ndichida kuseka. Asi handina kuseka nekuti
ukuwo ndakange ndonzwa kuda kusvirwa nguva iyoyo.
Related Topics:Kusvirwa nababa Kudzi
Zvokudhonza matinji zvinoita kuti kusvirwa kunyatsonaka!
Ndakasvira Angie mukoma wekuseri Akatarisa!